हावाहुरीका कारण भिक्टोरियाका ३ लाखभन्दा बढी घर विजुलीविहीन ! « KBC khabar
हावाहुरीका कारण भिक्टोरियाका ३ लाखभन्दा बढी घर विजुलीविहीन !
११ कार्तिक २०७८, बिहीबार २१:४७
अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यका तीन लाखभन्दा बढी घरहरुमा विद्युत आपूर्ति रोकिएको छ । हावाहुरीका कारण रुखहरु ढलेका छन् भने विद्युतका पोलहरुमा समेत क्षति भएका कारण उक्त संख्यामा घरका बासिन्दाहरुले विजुलीविहीन बन्नुपरेको हो । आज विहान शक्तिशाली हुरी तथा पानीका कारण राज्यका कतिपय क्षेत्र प्रभावित बनेका थिए ।
राज्यको आपतकालीन सेवाले करिब ६ सय ९ फोन प्राप्त गरेको र यी सबै हावाहुरी र यसको क्षतिसँग सम्बन्धित भएको जनाएको छ ।
मौसम विभागले दक्षिणी भिक्टोरियामा आज विहान मौसम चेतावनी जारी गरेको थियो । हावाको गति १ सय १९ किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म रहेको छ । माउन्ट विलियममा विहान १ सय ४३ किलोमिटर प्रतिघण्टा हावाको गति मापन गरिएको थियो । मेट्रो ट्रेनको लिकमा रुख ढलेका कारण क्रेनबर्न र पाकेनम क्षेत्रमा बस सञ्चालन गरिएको छ ।
मेलबर्नवासीले देखेको आज विहानका केही दृश्यहरु
Our beautiful gumtree bit the dust -My chickens are trapped but ok – Coop is intact and I can hear them clucking – going to have to climb in at some stage and let them out – hope no possums or birds nests injured 🤕 ( #melbourneweather #melbweather pic.twitter.com/iOZ0TQEJ25
— Stephanie Sims (@SteffSims) October 28, 2021
We just woke up to this tree falling on our bedroom window #melbourneweather pic.twitter.com/Gi3iZ2QAoP
— Corinne Melanie (@corinnemelanie_) October 28, 2021